Short agụ maka a izu ụka | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Short agụ maka a izu ụka
Ugboro ole ka anyị nọrọ obere oge ma anyi enwebeghị ike ego ịkwụsị ogologo oge n’ịgụ akwụkwọ dị mma? Nke a na - emekarị n'etiti mmadụ abụọ: ụmụ akwụkwọ na - ejedebe akwụkwọ ozi ma nwee ntakịrị agụụ ịga n'ihu na - ele akwụkwọ ma ọ bụ ndị ọrụ na - agwụ ike na njedebe nke ụbọchị ma ghara inwe ike iji nkeji ole na ole gụ akwụkwọ akwụkwọ na-eburu uzuzu n’elu tebụl n’akụkụ ihe ndina ya.
O nwekwara ike ime na ị bụ otu n'ime ndị ahụ riri ụgwọ "billet" ma chọọ ịgụ ọtụtụ ogugu dị iche iche mana na "belata mbipute".
Ihe ọ sọrọ gị bụrụ, anyị na-ekwu taa ọgụgụ dị iche iche, nke nwere ihe jikọrọ ha: ha dị mkpụmkpụ na ị nwere ike mechaa ha na ngwụcha izu dị ka nke na-aga ịkwụsị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị mee m ọsọ ọsọ, n'otu ụbọchị, dabere na ọchịchọ ị ga - ewere ya na ihe ịchọrọ akụkọ nke akụkọ ahụ.
Ndị a bụ obere ederede maka izu ụka ezigbo izu ike anyị na-akwado site na Akwụkwọ ndị dị ugbu a:
"Silk" de Alessandro baricco: Akwụkwọ dị mkpụmkpụ nke na-enweghị peeji 115 na ọgụgụ ya dị mfe. O nwere ezigbo asụsụ, ọ nweghị ihe juputara na nkọwa, ọgụgụ ya dịkwa ụtọ ma dịkwa mfe. Ọ nwere nnukwu ụgwọ mmụọ na nsonaazụ dị ịtụnanya. Onwe m, eji m ọrụ a tụnyere obere nkọwa ndị ahụ nke yiri ka ọ baghị uru na mbụ ma emesịa nwee nnukwu uru maka onye natara ya O doro anya na unu niile ghọtara ihe m na-ekwu.
"Akwụkwọ Akụkọ nke Ọnwụ E Buru n'Amụma" de Gabriel García Márquez: Oru eji ejiji n’oge ugbua n’ihi onwu nke onye dere ya (oge ufodu anyi n’aghota idi uku nke ndi mmadu na omume ha mgbe ha lara, obu ezie na oru a, diri onye edemede ya, bu mmata o kwesiri). Obere ihe a nwere ihe dị ka peeji 106 ma enwere ike ịsị na ịgụ ya "fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu". E tinyere ya na ndepụta nke otu narị akwụkwọ ọgụgụ kachasị mma na Spanish na narị afọ nke 1951, ma eleghị anya ọ bụ naanị n'ihi eziokwu a, ọ ga-adị mma ịgụ ya. O sitere n'ike mmụọ nsọ nke ihe mere n'ezie mere na XNUMX.
"Atọ na-acha odo odo atọ" de Raymond Carver; Akwụkwọ nwere peeji 158 nke nwere nnukwu akụkọ isii. Isi okwu nke onye edemede dere n’ime akwụkwọ a bụ ihe ndị a: America dara ogbenye, owu ọmụma nke ndị a na-amaghị aha ha na-eduga ná mwute na ndụ anodyne na-aga ibibi ọdịda nke nsogbu, nsogbu ezinụlọ na alụm di na nwunye, ihe omimi nke ndụ, wdg. A akwụkwọ na-agụ na ụfọdụ uche n'ọnọdụ dị ka ọ pụrụ ịbụ “siri ike” mgbe ụfọdụ.
"Neruda si onye nzi ozi" de Ọnye na -bụ Antonio Skarmeta?: A sụgharịrị gaa n'asụsụ iri abụọ na ise, ọrụ a ghọrọ akwụkwọ edemede nke mkpụrụedemede zuru ụwa ọnụ. Edere ihe nkiri ahụ dabere na ya maka Oscars ise. N'agbanyeghị ihe ndị a, n'echiche nke onwe m, echere m na taa ọ bụ ọrụ echefuru echefu. O nwere peeji 139, ya mere, ọ na-ezute mkpụmkpụ ọgụgụ achọrọ maka izu ụka, ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye na ihe niile ekwuru n'elu yana eziokwu na edere aha ikpeazụ nke "Neruda", echere m na anyị nwere ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji debe opekata mpe otu anya na ya.
"Obere Onyeisi" de Antoine de Saint-Exupery: Akwụkwọ maka ndị hụrụ omimi n'anya, maka ndị na-achọ karịa ịdị mfe nke akwụkwọ ozi na eserese maka ụmụaka, maka ndị na-eche na "ihe dị mkpa anaghị ahụ anya" ... Akwụkwọ a na-ezute ihe niile dị mkpa maka Ọgụgụ izu ụka dị mma : ọ dị mkpụmkpụ ebe ọ bụ naanị peeji iri itoolu na atọ, ọ gaghị ahapụ gị enweghị mmasị na ibe ọ bụla ị gụrụ, ị ga-achọpụta etu pụrụ iche egwu ya si ezo na obere ihu ọma ị ga-enwe obere ọierụ na njedebe.
No nweghịzi ngọpụ! Enweghị oge agaghị abụ nsogbu ị gụọ obere ọrụ ndị a magburu onwe ha anyị na-akwado gị taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Short agụ maka a izu ụka
Valencia ọchị maka 2015
Nkatọ nke akụkọ Walt Disney